Paradaịs Bohemia Ugwu Ukwu, Ugwu Jizera, Paradaịs Bohemia
Paradaịs Bohemia (German Böhmisches Paradies) bụ aha maka ókèala dị na etiti Pojizeř, nke a na-ahụkarị site na nnukwu ncheta nke ihe ncheta na nke akụkọ ihe mere eme. Aha aha Bohemian Paradaịs bu nke a na-ezo aka na mpaghara Litoměřice (nke a na-akpọzi Ogige Bohemia) nke ndị Germany na-asụ. Ejila 2 kee nkọwa ugbu a. ọkara nke 19. narị afọ. Dika edere ndi dere ya ndi nlere anya ndi gara nleta Sedmihorky Spa, ma akwukwo nke mbu edere, si n'aka 1886 bu onye nchikota nke Václav Durych.
Territory-agha ụgha banyere 90 km n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Prague na-na mkpokọta bounded site n'obodo ndị: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Zelezny Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Railways na Jicin. The "obi nke Bohemian Paradise" bụ omenala na-ewere Turnov. Isi akara nke region ugwu Kozákov na Trosky nnukwu ụlọ mkpọmkpọ ebe. Ịrịba Ama nwekwara nkume obodo, karịsịa Prachovské nkume, nkume Příhrazské, Hruboskalsko na ponds, n'ihi na ihe atụ. Žabakor, Komárovský ọdọ na ponds na podtroseckých podkosteckých na ndagwurugwu.
Paradaịs Bohemia bụkwa aha maka ebe a na-echebe ya, ebe ọ bụ na 1955, nke nwere nanị ebe dịpụrụ adịpụ atọ dị na mpaghara ebe a na-ahụkarị n'ógbè ndị njem nleta Bohemia Paradise.
Maloskalsko Nature Park bụ a na-echebe ebe kwuru, ke 1997, nke dabeere na ndịda ọdịda anyanwụ ókè district nke Jablonec nad Nisou Liberec region, nwere obere na PLA Czech Paradise. Ọ dabeere na ma bịara n'ikperé mmiri nke Jizera River, Amidst lush obodo jupụtara aru nkume formations. Chepụtara echepụta center, dị ka nke ogige aha, bụ obodo nta nke Mala Skála.
Ebumnuche ikwusa a eke park rụpụtara si ruo ogologo oge efu mgbalị iji mụbaa na-echebe ebe nke Czech Paradise na municipalities Little Rock, Koberovy, Frýdštejn, Líšný na obere Pěnčín na Zelezny Brod.
Isi ebe a bụ osimiri Jizera. Site na Železný Brod ka Turnov ọ na-ebugharị n'ime mmiri ide mmiri nke dị na Pojizeří - Ještědsko-Kozákovský. Ebe nrụọrụ ndị a bụ ebe kachasị ọnụ ahịa, ụfọdụ n'ime ha bụbu akụkụ nke netwọk nke ebe echedoro ma ọ bụ atụmatụ ọdịda ala dị ịrịba ama. NPP Dry Rocks, PR Bučiny na Rakous, PP Ondříkovický pseudokrasový systém. Obodo na ebe a gbasasịrị agbasapụ na-ewuli àgwà nke mpaghara a.
Top akụkụ nke ókèala, nke a na-adịkwaghị Vranovský mbo na akọrọ nkume, kpụrụ sandstone nkume. Part nke eke park levees Jizery sparsely kpuchie ahịhịa na na wider ebe ya Wold na-agụnye osimiri na akụkụ nke mkpọda ugwu, na ọtụtụ mbuze na gbawara. Jizera eje ozi dị ka a conduit maka agbadata ugwu di ala ala osisi na ala karị. Na-abụghị ntụziaka n'akụkụ osimiri thermophilic osisi na-agbasa n'ime ugwu.
Nke mbụ ọhịa ecosystems ahụkarị ebe a na-anọchi anya beech ọhịa, acidophilous pine na pine-ọhịa osisi oak. Ịrịba Ama nonforest ecosystems gụnyere mmiri ala ahịhịa juru, a mbụ sandstone-awa nkume, Valley Stream na Vazoveckého saịtị saffron bělokvětého ka Zaborci.
Nyere nnọọ iche iche geological mkpụrụ na-Maloskalsko.¨ na n'akụkụ akụkụ Železný agwụ agwụ dịgasị iche iche nke obodo na umu-ha nke ha na-ewepụ relict ihe na remnants nke mbụ ahịhịa nọgidere na-enwe na o siri ike inweta saịtị (beech ọhịa, pine-oak, nkume ndụdụ, mmiri ala ahịhịa juru, isi iyi, wdg). . Otu n'ime ihe ndị dị mkpa osisi na-eto eto ebe a e.g. saffron tuberose, trigeminal n'oge coral, polystichum lonchitis, akpukpoukwu, Helleborine red, ọcha helleborine orchid na orchid. Obodo nkume nkume nkume na-enye ebe dị mma maka ọtụtụ nnụnụ dị mkpa. Ha na-ebi ebe a Swallowtail, toddler eke na egwurugwu, salamander, awo, ngwere, slowworm na ndị ọzọ.
Klokočské nkume bụ ebe a na-ahụ anya. Ee e. 918 na Jicin Hill, n'ebe ọdịda anyanwụ nke obodo Klokočí na Semily district na mpaghara Liberec. AOPK Czech Republic na-achịkwa ebe ahụ - Liberec Regional Office. Reserve Nature Reserve dị na Ala Ala Bohemia nke A Na-echebe Ala, ebe ndị dị mkpa na Europe dị na nhazi nke Jizera na Rakousy na Paradaịs Bohemia Paradise Geopark.
Nkume Kịnčské na-etolite nkume dị elu na njedebe nke ịchọpụta quartz sandstone site n'elu turon iji nweta ume, na-achọ n'ebe ndịda ọdịda anyanwụ. Ebe kachasị elu (458 m nm) na-adabere na ngwugwu nsị nke dị n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. Kuesty nta bughi ịrị elu Central na ugwu ọdịda anyanwụ abahade sufozní ọtụtụ sinkholes, on a nkpoda mkpọda bilie elu, na ogidi na nkume mgbidi na shapes ka ndị dị ike ndọda odsedání úpatními ikpo. E nwere niches nkume, pseudocross caves (ọtụtụ n'ime ha dị ịrịba ama na nkà mmụta ihe ochie) na nkume nkume. A na-eji osisi fir, osisi ụfọdụ, na osisi pine. N'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ, e nwere mkpọmkpọ ebe nke Rotštejn Rock Castle. Enwere ụlọ elu. Site na mbara igwe nke dị na SZ-JV, e nwere echiche dị oke ugwu nke ugwu ugwu dị n'akụkụ Roven Ward.
Kozákov (744 m) bụ ugwu kachasị elu nke Kozákovský ridge na Paradise Bohemia. Site na prehistory, a chọpụtawo elu dịka ụlọ ahịa nke nkume dị oké ọnụ ahịa, nke ndị na-achụ nta oge ochie mere ngwá ọrụ dị mfe. A na-eti mkpuchi na ebe ndị dị na nkume dị elu nke jupụtara na agate, jasper, amethyst, crystal, greens na nkume ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa. A na-eji saịtị ahụ eme ihe n'oge ochie iji mee ka ụlọ nsọ dị mma. Kozákov bụkwa ebe a na-ewu ewu maka paragliding.
Akụkụ kasị ukwuu nke mpaghara Kozákov bụ site na nkume nkume dị iche iche, nke na-ekpuchi isi na basalt na sediments n'elu, n'ebe ugwu na n'ebe ọwụwa anyanwụ. Tupu 6 gaa na 4 maka ọtụtụ nde afọ, Kozakov bụ ọkụ ọkụ ọkụ. Akụkụ dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Kozákov bụ nke a na-ejikarị osisi sandstones Upper Cretaceous Cenomanian. A na-agbaji ndị a n'ime kerti ole na ole na Tertiary ma weta ha n'ụdị ha ugbu a.
Ọ bụ a sara mbara akpàràkpà elu na kacha gbaa antiklinálního bazaltandezitového (melafyrového) nke elu na nke ala-agafeghị oke ọwụwa anyanwụ mkpọda (15-20 Celsius) na ewepụghị elu òkè na lava igba Neogene olivine basalt (basalt), mgbe na-agba ọsọ ala azụ n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. Na elu na steeper ọdịda anyanwụ ná mkpọda ha pụta ìhè tectonic nkanka nke sandstone (max. 667 m) na ókè mgbidi, nkume elu, niches, abaitiat, úpatními nkume ikpo. Osimiri melafy na basalt bụ iyi mmiri na oké osimiri.
N'ebe ọdịda anyanwụ nke ọdịda anyanwụ, e nwere ọtụtụ ebe ndị melafyrous dị ka Votrubec Quarry. Ọ bụ Votrubka nwe ya na nzuzo, ọ gụnyekwara obere Museum of Precious stones. Maka ntakịrị ego, ọ ga-ekwe omume igwu na ebe ị na-eji ihe eji agbazinye ego taa taa ịchọta nkume ndị dị oké ọnụ ahịa, nke onye nwe ya nwere ike igwu.
Na emepechabeghị anya, ha gbara ọkụ ọkụ na Kozák. Mgbe e mesịrị ọtụtụ puku ndị mmadụ gbakọtara ebe a. Na 1901, onye nyocha Turnov Jan Prousek nyere ya n'elu ụlọ ahụ ma ọ bụ ụlọ chọọchị neo-Romanesque nke St. Cyril na Methodius ma ọ bụ karịa 20 mita elu Slavic mgbagwoju anya na osisi artificia kụrụ na nkume semiprecious. Mgbe a mụrụ Czechoslovakia, a na-agba 28 ọkụ kwa afọ. October hearth. Mgbe ọnwụ nke Franz Ladislav Rieg nke 1903, a mụrụ echiche ahụ iji sọpụrụ ncheta ya site n'ịrụpụta Rieger's Mounds. Otu afọ mgbe e mesịrị, "Rieger Mound Construction Team" kwalitere nchịkọta mba nile na-aga nke ọma. Mgbe e mesịrị, echiche abụọ kwụrụ: ebe mgbagwoju anya ma ọ bụ ebe a na-eme nri na ụlọ ntụrụndụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Riegrov. Nke abụọ dị iche iche bụ nke Czech Tourists Club. Nkịtị nke ụlọ ahụ bụ 29. August 1926. E wuru ụlọ ahụ site nchịkọta, onyinye na onyinye sitere n'obodo ndị dị nso. E mere ka 24 meghee. June 1928. N'oge Agha Ụwa nke Abụọ, German na ndị agha Czechoslovak nọ na-elekọta ụlọ ahụ. Mgbe February 1948 gasịrị, a na-ahazi ụlọ ahụ ma zigara ya na Ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Na May 1964 hut ọkụ. Ulo 1994 nke ndi na-eme njem nleta na Czech na ulo ala nke Semille n'ime afo iri afo zitere ya na steeti. Na 1995, a na-emeghe ụlọ elu 40 na ikpo okwu nyocha na mita 24 n'elu. Ụlọ elu ahụ na-ele anya na-arụkwa ọrụ dị ka ígwè ndị na-akpọ telefon maka ndị agha, ndị uwe ojii, na ndị ọkụ ọkụ. Kemgbe 2002, Kozákov bụ akụkụ nke Mpaghara Ala Na-echebe Ala Na Paradaịs nke Bohemia. Na 2003, ụlọ ndị Rieger amaghachiri mgbe ọ gbasịrị izugbe. Ụlọ elu ahụ na-ele anya na-eleta Paradaịs Bohemia, Pojizeří, České středohoří, Giant Mountains na Ugwu Lusatin, Ještěd, ugwu, Podcastkonoší, Broumovská vrchovina, Orlicke hory na ikekwe na foothills nke ugwu Bohemian-Moravian.
Na Nature Reserve Příhrazské skály kwuru 1999 afọ na-adị na ndịda na n'ebe ọdịda anyanwụ nke obodo Příhrazy na district Mladá Boleslav. Ihe kpatara nchedo bụ ihe dị mgbagwoju anya nke nkume, ógbè okike na okike, na mpaghara ndị dị mkpa.
Ebe nchekwa ahụ bụ ihe mgbagwoju anya nke obodo ndị dị egwu na nsọtụ nke nkume nkume nkume. Ihe kachasị mkpa bụ nkume a na-akpọ Kobylí. N'ime obodo ukwu ahụ, e nwere Hynstas a pịrị apị. Onye na 17. narị afọ gara aga dị ka ebe obibi maka ụmụnna ndị Czech. N'ebe ahụ, e nwere ihe fọdụrụ nke ụlọ obibi 13. narị afọ.
Ala ugwu Příhrazská dara n'okpuru ugwu Vyskeř n'ime ugwu Jicin. Ebe kachasị elu nke ebe ahụ bụ 463,5 m. Nke a kachasị elu nke Olivinian Nepheline vein bụ tectonic ohia dịka ọkara n'ime ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. A kwadoro nke a site na iji onu ogugu nke oke okwute mmiri na oke nke mmiri si na ntọala ha. Ihe kachasị ochie nke ugwu Příhrada bụ ihe nkwụsị nke usoro - ngwụsị nke ikpo okwu. Obodo ukwu nke Příhrazské skály gụrụ ụlọ elu 178. Ọtụtụ n'ime ha na-eguzo n'akụkụ ọnụ mmiri ndagwurugwu dị n'elu isi ụlọ tectonic. A na-ejikọta ihu n'ihu ya na otu onye na-agba ọsọ na-agba ọsọ dịka ntụgharị ihu ala. Nnukwu ihe mberede n'ime oge gara aga mere na 1926 na June. N'ihi ya, e bibiri nnukwu akụkụ obodo Dneboh ma mebie okporo ụzọ district na Olšina.
N'ihi ihe nkedo nke ndi oji, ndi mmadu na-eme ka ha di elu, na-ekwe ka e guzobe uwa. Anyị na-ahụ ha na nkume Příhrazské dịka iri isii. Ihe a kacha mara amara bụ ọmarịcha pseudocross nke na-eme ka ihe nrịba nke 22,5 gafere. bụ nke a chọpụtara na 1960, nke afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, onye njem Gustav Ginzel, onye nwe ụlọ Jizera Manure House maara nke ọma, gbadara. Na ndagwurugwu Canyon nke Krtola na Vlčí Důl, anyị nwere ike ịhụ ọnụ ụzọ ámá nkume, ụlọ elu nkume na oghere. Krtola Cave, nke a makwaara dị ka Sklep na Chodové, bụ ọgba kachasị nke Paradaịs Paradise. A na-ebu ụzọ chọpụta ọgba a nke 40 a na 80. afọ 19. onye ọkà mmụta ihe ochie bụ Josef Ladislav Píč.
Enwere otutu uzo na ígwè inlaid. Anyị nwere ike izute ebe a na nkume. E na-kpụrụ a aja aja jupụta ala (Cambisol eutrophic) na Rankers (ahụkarị na litickým) na sandstones arenosoly acid (s Cambisol arenická podsol arenickým). Ọnọdụ a kpochiri ekpuchi na-ejide onwe ya (na-ahụkarị ma na-egbukepụ egbukepụ) na gley (ụdị na organozem), akụkụ nke ndoputa na glezou organozem.
Akwukwo ndi ozo bu oke oke ohia umu oke ohia. Fir n'ọhịa n'elu nkume, stunted thermophilic oak osisi na loess oge ochie castles, na irighiri ọhịa n'okpuru elu nke nwoke, ebe ọ na-etolite perennial (Lunaria rediviva), kwubara n'etiti ndị kasị oké ọnụ ahịa nke ha. Ihe na-akpali mgbe bụ agwaetiti steppe ahịhịa Ivan Stipa (Stipa Joannis) on a nkume dị larịị Hrad. Ọ bụ ebe ikpeazụ a maara nke thermophysics n'akụkụ a nke Paradaịs Paradaịs. Na mgbakwunye na ya, a na-ahụ ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị na-adịghị mma. On Drábské světničky eto eto cotoneaster (Cotoneaster integerrimus). The inverse pụrụ ịchọta aṅụju beech spruce admixture na eke nkume mgbidi na-anọchi Vranča fir (Huperzia selago) na Lycopodium Annotinum (Lycopodium annotinum). Site na echiche nke botanical, Krtola bụ ọmarịcha ama ama.
N'ime ebe a na-echekwa n'ebe ndịda nke ọdọ mmiri Oběšenec, e nwere osisi a na-echefu echefu Dub na Oběšence.
Hruboskalsko bụ ebe a maara maka 22. April 1998. 219,2 ha bụ otu n'ime obodo ndị kachasịnụ na nkume ndị dị na Ala Bohemia Paradise Protected Landscape Area. Ihe kpatara nchebe bụ nnukwu nkume na-echekwa ihe ndozi. Hruboskalské nkume obodo na-agụnye ọtụtụ narị rock massifs na iche iche elu, nke iru elu nke elu 60 m. N'ihi na ala-eguzogide sandstone na-aga n'ihu na mmetụta nke a ọnụ ọgụgụ nke nkume ndị ọgaranya na a dịgasị iche iche nke shapes na iche-iche (honeycombs, windows, ọnụ ụzọ ámá). Hruboskalsko bụ akụkụ nke Parahemia Paradise Geopark, bụ nke gụnyere na netwọk nke Europe na October 2005.
Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị elu nke Czech, ebe a kacha mara amara bụ Kapelník, Skull, Maják na Osudová. N'etiti n'agbata ndị Czech na-eme njem na mpaghara Ala Ala Na-echebe Ala nke Ala Bohemia, e mekọrịta nkwekọrịta, nke gụnyere ọnọdụ maka ịrịgo nkume.
Hruboskalské nkume obodo bụkwa ebe dị mkpa njem nleta. Otu n'ime ụlọ ncheta kachasị ama bụ Hrubá skála castle, nke e wuru n'elu nkume massif nke dị na 14. narị afọ na Wallenstein Castle. Mgbe mmadụ hiwere e wuru ọtụtụ nlegharị anya ebe ndị dị otú ahụ dị ka Marian atụmanya, atụmanya nke ìgwè, na atụmanya ọdụm na ọzọ ebe ndị ọbịa nwere ike na-edebe nnukwu nkume formations na nke ukwuu mgbe climbers zdolávající gburugburu elu. Dabere na isi iyi nke Hruboskalska bara ọgaranya na ions calcium, e kere Sedmihorky spa n'ebe a.
Ngwurugwu Nature Hruboskalsko dị na mpaghara Liberec nke 3 kilomita site n'obodo Turnov. Ọ dị n'agbata obodo nta Sedmihorky, ike ike Rock na Kacanovy. Elu ebe a bụ n'etiti 265-420 m. Hruboskalské nkume obodo kasị dị oké ọnụ ahịa na nkume obodo dị na-echebe odida obodo ebe Czech paradise.
A na-ekewa obodo ukwu na ụzọ anọ. Nke mbu bu uzo okwadoro nke aru sandstone di n'ala ala. N'ihi mmiri mmiri na-arụ ọrụ, nhazi nke akpụkpọ ụkwụ nke nkume na-acha gburugburu ebe ahụ. N'oge a, mmetụta nke Ice Age n'oge mgbagwoju anya na-ada ada na-ada ada. Ngalaba na-esote bụ ụzọ mbụ nke tectonic picking and erosion. Ihe si na ya pụta bụ ala ala dị larịị nke etiti Etiti Bohemia. Usoro nke atọ bụ oge tozuru okè nke na-eme mgbe njedebe nke tectonic elu. Mgbe a na ogbo, dị iche iche nke weathering echebe enye nkụ bụ gbajiri exfoliating flakes, nke na-eso n'ọnụ nke nkume mgbidi na ike nwere ọkpụrụkpụ nke ruo 1 m. Ikpeazụ na-adọ bụ na-adọ nke ịka nká, metụtara mbibi nke oké nkume formations. Mbibi na-emekarị site na mmegharị na-agba ọsọ, na-agba nkume ma na-ewusi obodo ukwu. N'ihi ya, anyị nwere ike ịhụ obodo ukwu ahụ dị ka ihe mgbochi nke ochie. The nkume obodo, nakwa dị ka ndị ọzọ na mpaghara, mepụtara 18-20 nde afọ.
Hruboskalsko Highlands bụ nke Vyskeřské Highlands, nke bụ nke Turnovský Hills. Ihe a nile bụ akụkụ nke Severočeská tabula. Hruboskalsko Highlands bụ tectonic yiri mgbaaka, nke bụ bounded libuňským ezumike na a ezumike na osimiri ndagwurugwu na osimiri Jordánka Žehrovka. Fundamentals nke oké nkume malitere na tọrọ Pleistocene, mgbe microforms honeycombs, nkume ledges, cavities na windo e kere n'oge Holocene. Ndị kasị dị ịrịba massifs laithaus, a otu bandleader na Dragon nkume. Anyị nwekwara ike ịhụ ọnụ ọgụgụ ntà, ọnụ ụzọ ámá nkume na tunnels. Hruboskalské rock town bụ nke adịghị ike lithicated quartz sandstone. Ike sandstone bụ 120 na ụfọdụ nkume na-elu ruo 60 m.
Okpukpo ka oke ohia kpuchie oke ohia (97%). Ụdị dị iche iche bụ ihe nkedo nke birch, bụ nke e chebere naanị gbasasịa, karịsịa na ọnụ ọnụ ụlọ elu nkume ma ọ bụ nkume rock. Ị nwekwara ike ịchọta osisi oak, ma ya na osisi oak. Uzo ozo nke oke nkume bu achikota acic acid, nke kpuchiri okwute mmiri di n'etiti nkume.
E ji mara ụdị n'okpuru ogwu oyi akwa karịsịa bilberry red (Vaccinium myrtillus), Heather (Calluna vulgaris), red whortleberry (Rhodococcum vitis-idaea), Deschampsia flexuosa (Avenella flexuosa), bracken (Aquilegia vulgaris) na bika ntutu (Luzola pilosa) . Na dee mmiri ndagwurugwu mgbe anyị na-ahụ Austrian fern (Dryopteris carthusiana) na nri fern (Dryopteris dilatata). Otu ihe atụ bụ nwekwara ọnụnọ nke sedge (Carex) na nkịtị amì (Phragmites australis), karịsịa gburugburu obere ọhịa ponds. Na ndagwurugwu na isi iyi, iyi a na-ahụkarị horsetail kasị (Equisetum telmateia) Otu n'ime ndị na-echebe osisi na-ugboro ugboro na-ewere ọnọdụ trichomanes (Trichomanes speciosum). The kasị mfịna invasive umu bụ Eastern ọcha pine (Pinus srobus) nke nwere ike imebi mmekọrịta na ecosystems nke relict pine ọhịa. E kụrụ na ndị ọzọ na-eto ngwa ngwa ụdị osisi ndị dị otú ahụ dị ka red oak (Quercus rubra), European larch (Larix decidua) na nnukwu fir (Abies grandis).
Enwere abụọ nākpu akpu, ngwa (Anguis fragilis) na agwọ (Natrix natrix) na abụọ ụdị amphibians, awo (Bufo Bufo) na frog (Rana temporaria). Obodo ukwu ahụ na-emepụta ọnọdụ ọma maka nesting nnụnụ. N'ihi ya, anya, e a hụrụ 73 ụdị nnụnụ na 62 umu nwere ọbụna nesting.  Otu n'ime ihe ndị kasị ukwuu na-agụnye Kestrel (Falco tinnunculus), na tawny ikwiikwii (Strix aluco), Chaffinch (Fringilla coelebs), redstart (Phoenicurus phoenicurus), jay (Garrulus glandarius) goldfinch (Carduelis carduelis) magpie (pica pica), nza (Passer montanus) green woodpecker (Picus viridis), bellflower (Carduelis chloris). Otu n'ime ihe ndị na-echebe nnụnụ na-agụnye ilo (Hirundo rustica) Common Swift (Apus apus) ikwiikwii (Etuto ahụ Etuto ahụ), Raven (Corvus corax) Jackdaw (Corvus monedula), pied (Ficedula parva).
E hụrụ 14 mammals - ewi (Meles meles) European ahumachi (Talpa europaea), pine marten (Martes martes), pine marten (Martes foina), na nkịta ọhịa (Vulpes vulpes), mouflon (Ovis musimon), odo-olu ike òké (Apodemus flavicollis), akụ vole (Clethrionomys glareolus), ọhịa boar (sus scrofa), shrew (Sorex araneus), Roe (capreolus capreolus), osa (Sciurus vulgaris), ùrúrù (Lepus europaeus) na nta akpukponu inyinya ụsụ ( Rhinolophus hipposideros), nke a na oké nọ n'ihe ize ndụ. Ọnụ ọgụgụ ya gụnyere mmadụ 150-300. The akacha aa invertebrates na mpaghara na-agụnye crosshead temnostní (Meta menardi) Cicindela campestris (Cicindela campestris) ammophila sabulosa (ammophila sabulosa) ndanda ọdụm nkịtị (Myrmeleon formicarius), ebe pine (Spondylis buprestoides) atụrụ dazule (Acanthocinus aedilis) . Mgbe ụfọdụ ya nwere ihe urukurubụba uhie tiger nla (Callimofpha dominula).
Ihe kpatara nchebe bụ obodo kachasị mkpa na Paradaịs nke Bohemia na ihe eji eme ihe. E nwekwara ọtụtụ osisi na ụmụ anụmanụ na-echebe. Dịka ọmụmaatụ, osisi ahụ bụ mkpọmkpọ anụ (Trichomanes speciosum) na Rhinolophus hipposideros dị egwu. Ókèala nke idobere okike bụ akụkụ nke Mpaghara Ala Na-echebe Ala nke Paradaịs nke Bohemia, nke bụ nke Gọọmenti nke Mpaghara Ala Na-echebe Ala nke Paradaịs Bohemia. Nchebe nke ókèala ahụ agbakwunyere na Plan of Care maka PR Hruboskalsko. Nsogbu kasịnụ nke nchebe gụnyere ịdọpụ ihe ọkụkụ ahịhịa sitere na nkume, na-akụda ala n'okporo ụzọ ma na-egweri nkume na eriri elu.
Ngwurugwu Nature nke Hruboskalsko bụ ebe nleta eleta. Na mgbakwunye na ịrịgo, ịga ije na ịgba ígwè bụ ndị nkịtị. Ndị ọbịa ọ bụghị nanị na-enwe mmasị n'echiche dị oke egwu nke nnukwu nkume, kamakwa ọdịdị pụrụ iche. Enwere ọtụtụ nlegharị anya maka ndị nleta na ndị na-agba ígwè. Otu n'ime ihe ndị kasị akpali njem nleta tụrụ-agụnye, Marian atụmanya nso nnukwu ụlọ nkume Gross, ebe ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma echiche na Czech Paradise na dragon nkume na irighiri. N'okpuru ebe a na nnukwu ụlọ nkume Gross nnukwu ndagwurugwu na iri isii na ise mita ogologo nkume korido akpọ Òké Oghere. N'etiti ihe ndị na-adọrọ adọrọ dị mma bụ Arboretum nke Bukovina na ụdị nkume nke Čertova ruka. Nke a bụ ebe ndị ọkà mmụta ihe ochie na ihe fọdụrụ nke nnukwu ụlọ ochie. Ndị ọzọ dị mkpa omenala na saịtị na-agụnye Hruboskalsko Valdštein nnukwu ụlọ, n'obí Gross nkume, mpako na ije Kopitcův ugbo na spa Sedmihorky. N'ihi na multi-ụbọchị bịara ebe, ọ bụ omume na-eji dị iche iche nhọrọ maka ulo ke obodo guesthouses ma ọ bụ na a mma mara ụlọikwuu Sedmihorky.
Hruboskalské nkume obodo bụ ebe kachasị elu. E mere nke mbụ solo nrigo na Czech 1928 Ma ọ bụ na ụlọ elu, nke na-ebu Charles Čábelka na teammates na Bausys Náhlovským. A na-ewerezi mgbakwasị ụkwụ n'elu ugwu ahụ dị mma maka nkwadebe maka ugwu ahụ. N'oge agha na-ezo Hruboskalsko Joska speck na n'ụzọ dị ịrịba ama gbanwere Czech sandstone rịa na ghọrọ a nlereanya ka ọtụtụ ndị ọzọ na climbers. Mgbe agha Hruboskalsko ghọrọ etiti Czech sandstone ịrị. Nwere mmasị na-arị Czech Republic ebelata budata mgbe afọ 1989, nke meghere ekwe omume nke na-akpụ akpụ ná mba ọzọ, ma ugbu a, na-ebili ọzọ. Hruboskalsko rock akụkụ nke a atụ na-eli ozu, nke mbụ e wuru na echiche ike a ncheta climbers bụ onye nwụrụ na n'ogige ịta ahụhụ n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. N'ikpeazụ, ọ ghọrọ ihe ncheta nye ndị ugwu ndị ọzọ nwụnahụrụ n'ugwu.
Trosky (514 m n'elu oké osimiri, na map a kọrọ elu 488) bụ neovolcanic ugwu na nnukwu ụlọ emebi Trosky na-akpọ na PLA Czech Paradise, odika n'etiti Turnov na Jicin, cadastral obodo na district Troskovice Semily Liberec mpaghara. Irighiri bụ a nnọchianya nke Bohemian Paradise na otu onye nke kasị gara castles na Czech Republic. Na elu nke ugwu bụ a na-echebe ihe ncheta sitere n'okike mkpọmkpọ ebe. Ọgụgụ kasị elu bụ kasị elu mgbe Vyskeřské Highlands.
Debris bụ ebigbote mmiri nke cone. Nhọrọ ozize were nnukwu pyroclastics na yipụ ọkọnọ ejima soro mbụ monogenic agbọpụta ọkụ kpụrụ kọmpat basanites (a ụdị basalt). Na ohere n'etiti ụlọ elu abụọ bụ ka dị bazanitové subhorizontally echekwara efere ahụ na-agba mbọ subvertical columnar jointing. Nke a na-anọchite anya mpaghara nke mmiri iyi nke a wụsara na Baby. A na-ejikọta onlets na kọmpụta pyroclastic. Ịdọ na-mepụtara, ma udidi nke ego, o doro anya na slag edebe na slag elu n'ụdị a cone. Ogo fragmentation na ugboro nke vesicular iberibe na Strombolian ụdị ọkọ. Bazanit z Trosek ka edere ya na 16,5 maka ọtụtụ nde afọ. Ọrụ ahụ malitere site na okike nke papa slag cone, nke a na-esonyere ya. Mgbe e mesịrị, na displacement nke etiti nke ọrụ ubé n'ebe ọwụwa anyanwụ, na-enye ịrị elu nwanne Virgin cone. The ọkọnọ ụzọ penetrates Virgin relict lava stream jikọtara cone nwa na a lava slag Virgin yitewere. Ọrụ ahụ gbanwere ọbụna gaa n'ihu n'ebe ọwụwa anyanwụ, ebe 20 dị, dị ka ndị akaebe ahụ si kwuo, ruo n'afọ 1940. nke dị na narị afọ gara aga, nke dị na narị afọ nke ochie. Abụọ nkume elu ịda dissected soupouchu ogwe e yie na mgbakwunye anthropogenic eme periglaciálním ntu oyi weathering: ntu oyi ọnụ ọnụ ugwu, cracks na nkume columnar nkewa nkwere. N'akụkụ ugwu ugwu na-arị elu, e guzobere mgbidi ntọala. E nwere otu nnukwu sandstone nkume formations iguzo ná mkpọda ugwu (rock obodo - Apolena Nature Reserve na ndịda-n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ). Ọnụ ọgụgụ kasị elu bụ osisi wood na pine osisi, ụfọdụ n'ime ha bụ spruce na beech guzo.
Prachovské Rocks bụ nkume otu sandstone formations nke dị iche iche shapes, ndinyanade mbịne banyere 5 ka 7 km ugwu ọdịda anyanwụ nke Jicin, Nature Reserve, akụkụ nke PLA Czech Paradise na-ewu ewu na-eleta eleta. Ha sitere na oge nke Secondary dị ka mmiri na-adịghị na nsọtụ oké osimiri.
Enwere ihe omumu ihe omumu nke negosi na ndi mmadu biri ebe a na oge ochie nke Stone Age. Ebe nile nke nkume ndị ahụ bụ ebe nchekwa siri ike nke ebo Slavic, ọ bụ nanị ebe ole na ole jupụtara na ndagwurugwu. N'ime ya, e wuru ntọala mbụ ahụ.
Eleghị anya site n'ọgwụgwụ nke 13. E wuru Velis Castle na otu n'ime ọnụ ọnụ ala ndị dị na Veliš manor. Ọtụtụ iri afọ ka e mesịrị, a na-etinye ala ahụ na Vartemberks, e mekwara ebe dị iche iche na njedebe nke 15. a na-akpọ Trčková nke Lípa ebe a dịka ndị nwe. Ná mmalite nke 17. ọ bụ Smiřičati si Smiřice weghaara ihe onwunwe nke narị afọ, ma na 1625, ndị Wallenstein nabatara ala ahụ ma jikọta ya na Frýdlant duchy. Mgbe e bibisịrị mkpọmkpọ ebe ahụ, ebe obibi dị na nkume ahụ kwụsịrị.
A ọhụrụ ogbo amalite 1637 mgbe ala na ụlọ e ọdịda Colonel Henry Slik nke na-asị na ezinụlọ Slik na ihe onwunwe na Western Bohemia, bụ onye na-akwalite ahụ ama na onye eze ukwu Sigismund. Rod Šliky nwere mpaghara mpaghara ahụ ruo mgbe mba na 1948.
1866 bụ otu n'ime agha ndị Prussian-Austrian dị nso na nkume, nke ndị Prussia, ọ bụ ezie na ha abaghị ọtụtụ, meriri.
Kemgbe njedebe nke 19. narị afọ, nkume ndị ahụ ghọrọ ndị na-agba ọsọ na ndị njem nleta. Na 1933, ha ghọrọ ebe nchekwa ala.
N'ime iwu a na-akwụghachi ụgwọ, ezinụlọ Šliky nwetara mpaghara 1993 ma malite ịrụ ọrụ ndị metụtara njem nleta ebe a. A na-eme atụmatụ ndị mmadụ na-aga n'ihu na 300 000 ndị mmadụ kwa afọ.
Ihe odide mbụ nke ihe mgbagwoju anya nke nkume mere na 1874. Onye prọfesọ nke ụlọ akwụkwọ gọọmenti Jičín Antonín Zefyrin Maloch mere atụmatụ zuru ezu site na iji compass na ụzọ nkwụsị. Ihe nke ọrụ ya ga-abụ map zuru ezu nke a na-agwụbeghị. Ụzọ ndị mbụ na nnukwu nkume dị iche iche bụ ndị ụmụ akwụkwọ 1879 Maloch dere, bụ ndị, dị ka atụmatụ ya si dị, depụta map nke Prachov Rocks.
A na-eji otu aha ahụ mara egwu egwu nke Ivan Mladek.
Ugbu a, ndị njem nleta na-eleta atọ. Oge nleta ebe a sitere na 1. April ruo ngwụsị nke October. Ịbanye na nkume na-edozi ụgwọ. Ndị nwere ugwu nwere nhọrọ ịzụta tiketi na ego efu, ha nwere ike ịkwaga n'èzí okporo ụzọ ndị a họpụtara, mana ha ga-abụ ndị òtù CHS ma ọ bụ UIAA. N'elu nkume, e nwere ọtụtụ ndị gbanwere, dị iche iche a na-atụ anya ya. N'etiti oke nkume bụ ebe ọdọ mmiri na-akpọ Pelíšek.
Castle Pařez - nnukwu nkume.
Nke gara aga ugwu
isiokwu na-esonụ Olivetská awa